Semalt विशेषज्ञ: साइबर धोखाधडीको सिकार गर्न चाहनुहुन्छ? - कहिले पनि यो लेख पढ्न!
समय बित्दै जाँदा, इन्टरनेटले हाम्रो जीवन सजिलो बनाएको छ। सबै कुरा अब अनलाइन उपलब्ध छ, र हामी आफैंलाई संख्यामा उत्पादन र सेवाहरूको पहुँचबाट रोक्न सक्दैनौं। एकै साथ यो सत्य हो कि अनलाइन घोटालाहरू र जालसाजी गतिविधिहरूको संख्या बढेको छ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक रॉस बार्बरले उल्लेख गरे कि यस्तो परिस्थितिमा तपाईलाई निम्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखी अनलाइन सुरक्षित रहन सम्भव नहुन सक्छ:
पहिचान चोरी "परिचय धोखाधडी" को रूपमा पनि परिचित छ। त्यो एउटा अपराध हो जसमा ह्याकरले तपाइँको व्यक्तिगत जानकारीलाई सामाजिक मिडिया वेबसाइट वा इ-मेलहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दछ। उसले तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बर, क्रेडिट कार्ड विवरण, र ड्राइभर इजाजतपत्र नम्बर पहुँच गर्न सक्दछ। एक पटक उसले वा उसले तपाइँको जानकारी प्राप्त गरे, यो अवैध रूपमा केहि खरीद गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र तपाइँले आफ्नो जेबबाट पैसा तिर्नु पर्छ। त्यसकारण तपाईंले आफूलाई त्यस्तो चोरीबाट रोक्नै पर्छ र तपाईको संवेदनशील जानकारी इन्टरनेटमा कसैसँग पनि साझेदारी गर्नु हुँदैन। यो हैकर्स वा स्क्यामरहरूको पहिचान गर्न सम्भव छ यदि तपाईंले अज्ञात ईमेलहरू, फोन कलहरू वा सन्देशहरूमा प्रतिक्रिया गर्नुभएन भने। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले कुनै अपरिचित व्यक्तिसँग तपाईंको बैंक विवरणहरू साझेदारी गर्नुहुन्न।
अग्रिम शुल्क ठगी
एक अग्रिम शुल्क धोखाधडी घोटाला को एक सबै भन्दा सामान्य प्रकार को एक हो। यसले सामान्यतया पीडितहरूलाई ठूलो रकमको ठूलो अंश दिने वचन दिन्छ, सानो अग्रिम भुक्तानीको बदलामा। व्यक्तिहरू सजिलै ह्याकरहरू द्वारा पासोमा पर्न सक्छन् किनकि तिनीहरू छोटो समयमा केही कमाउन चाहन्छन्। यदि तपाईंले भुक्तानी गर्नुभयो भने, सम्भावनाहरू छन् कि ह्याकर तपाईंको पैसामा हराउनेछ, र तपाईंले उनीहरूबाट जवाफ प्राप्त गर्नुहुने छैन। यो धोखाधडी सामान्यतया ह्याकरले ईमेल, सामाजिक मिडिया वेबसाइट वा व्हाट्सएप मार्फत एक व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर सुरू गर्दछ। यदि कसैले तपाइँलाई अग्रिम भुक्तान गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने, तपाइँ कहिले पनि यस्ता ट्रिकहरू द्वारा पासोमा पर्नुहुन्न कि ऊ वा उनी एक हैकर हुनुपर्दछ। सम्मानित कम्पनीहरू र विक्रेताहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई पहिले नै केहि पैसा दिन तिर्दैनन्।
क्रेडिट कार्ड फ्रड
संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाका मानिसहरू क्रेडिट कार्ड स्क्यामको शिकार भएका छन्। यस प्रकारको धोखाधडीले सामान्य रूपमा भुक्तान कार्ड समावेश गर्दछ जस्तै डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्ड लेनदेनको स्रोतको रूपमा। ह्याकर्सले तपाईको क्रेडिट कार्ड विवरण ईमेल वा वेबसाइट लि through्क मार्फत साझेदारी गर्न अनुरोध गर्न सक्दछन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो जानकारी सुरक्षित राख्नुहुन्छ र यसलाई इन्टरनेटमा तेस्रो पक्षसँग साझा नगर्नुहोस्। यद्यपि क्रेडिट कार्ड धोखाधडीका घटनाहरू केवल केहि प्रतिशतमा सीमित छन्, यसले ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ किनभने ठगी लेनदेन उल्टाउन मिल्दैन। हालका महिनाहरूमा बीस प्रतिशत भन्दा बढी अमेरिकीहरूले क्रेडिट कार्ड फ्रडको कारण मोटा रकम गुमाएका छन्। युनाइटेड किंगडमका व्यक्तिहरूले यस प्रकारको घोटालाको कारण अघिल्लो वर्ष $ 500 मिलियन भन्दा बढी गुमाए।
यदि तपाइँ तपाइँको कार्ड हराउनुभएको छ वा यो चोरी भएको छ भने, तपाइँ तपाइँको नजिकको बैंक शाखा परामर्श गर्नु पर्छ यसलाई लक गर्न। यस्तो सम्भावनाहरू छन् कि ह्याकरहरूले तपाईंको क्रेडिट कार्डलाई असाधारण केहि लेनदेनको लागि प्रयोग गर्नेछन्।